शब्दकोश: January 2013
पसिनाले नुहाउँदा पनि
शीतल हुन नसकेको यो जुनी !
राप र तापको आहारा लिंदै
सूर्यको हातमा झुन्डिरहेछ पृथ्वी
यो गोलघर वरिपरि फन्का मारिरहेछन् सबै
रिंगटामग्न छ समय ।
Posted by Jotare Dhaiba at Tuesday, January 29, 20134: Comments
पाठशाला, वर्तमान र भविष्य
केही छिपछिपे याद छन् स्कुले दिनका । तिनै छिपछिपे यादमा छोपिएका दिनका असरले नै हिंडाइरहेछ जिन्दगीमा । एक मानेमा, स्कुल चराको गुँड र विद्यार्थी बचेरा जस्तो लाग्छ । अज्ञानी अवस्थामा हामी आँखा टालिएका र पखेटाका नाममा कुरकुरे हाड मात्र भएका बचेरा हुन्छौं । समय क्रममा हाम्रो आँखा खुल्दै जान्छ, पखेटा उम्रन थाल्छ र एक दिन त्यो गुँड छाडेर उच्च शिक्षा र आत्मनिर्भर बन्ने नाममा उडेर टाढा पुग्छौं । यस्तै एउटा उडानमा हुत्तिएर म उदयपुरबाट कान्तिपुरी नगरीमा पुगेको छु ।
उफ्रँदै, खेल्दै पढेको श्री जनज्योति माविले हाल आएर उच्च माविमा फड्को मारेको छ । भवनहरू पनि पहलमानलाई बिर्सने गरी भीमकाय भएर ठडिएका छन् । तर चारकुने चौरको क्षेत्रफल भने उत्रै र उस्तै छ स्कुलको । त्यो सीमित आँगनबाटै बरु कयौं छात्रछात्राले फराकिलो भविष्य तन्काउँदै आए । त्यो क्रम जारी नै छ । कयौं पैंतालाले माडिने स्कुलको आँगनमा आफ्ना लालाबालामा आशीर्वचन छर्ने बीज हुँदो रहेछ क्यार ।
Posted by Jotare Dhaiba at Sunday, January 27, 20132: Comments
Labels: गाउँघर, संस्मरण
सिंहदरबार दरबार कम र सिंह बढी जस्तो
सीसी क्यामेराको बन्दुक तेर्स्याउँछ
हरेक अनुहारमा अपराधी खोज्छ -
ओइ फल्ना-फल्नी, तिमीमाथि मेरो निगरानी छ !!
आफू जस्तै संशकित साथी खोज्दै फगत हेरिरहन्छ
कहिले सालिकको आँखाले हेर्छ
कहिले मालिकको आँखाले हेर्छ
Posted by Jotare Dhaiba at Sunday, January 20, 20130: Comments
शान्ति प्रक्रिया भाँडिन्छ !
सर्वत्र शान्ति र सहमतिको चर्चा छ । यो समयको नेपाली हिट फिल्मको नाम यस्तै केही हुनुपर्ने – ‘शान्ति अफ थ्री ब्रदर्स’, ‘सहमतिले लौ न सतायो’ । शान्ति र सहमति, सुन्दा मीठो कुरा । तर धेरै सुनेपछि अघाइँदै जाने ! हामी यो बेला शान्ति र सहमतिको व्याख्या मात्रले पनि सन्तोषम् परम् सुखम्‌को अवस्थामा छौं । श्री सन्तोषी माताको कृपा परे जस्ता हामी नेपाली !
यतिबेलाको यही शान्तिको सर्वप्रियता र महत्तालाई तीन टुक्रामा जोखाना हेरेको छु :
अफिम रोप्न निश्चित रुपमा फूल फाँडिन्छ यहाँ
हाम्लाई लाइराछ मर्नुअघि नै मान्छे गाडिन्छ यहाँ
अलि बिस्तारै कपाल कोर न ए हिसिला मैचा,
चायाँ झर्छ अनि शान्ति प्रक्रिया भाँडिन्छ यहाँ !
भात के थपिन्छ र, त्यति म्याद थपिन्छ जिन्दगीमा
परामर्शको धपेडीले जाडोमा गर्मी खपिन्छ जिन्दगीमा
भैंसीदेखि कुर्सीसम्मको आसनले यस्तो आदत बनायो,
लोक नै डुबे’नि लोकतन्त्र लोकतन्त्र जपिन्छ जिन्दगीमा ।
कोही टाउकाको मोल तोक्नेलाई ठटाउने भन्छन्
कोही पुरानो घाउ व्यर्थै किन कन्याउने भन्छन्
कसको कुरा सुन्ने अनि कसको कुरा मान्ने अब,
कोही चाहिं देश बेचेर राष्ट्रियता भित्र्याउने भन्छन् ।
Posted by Jotare Dhaiba at Thursday, January 17, 20134: Comments
Labels: मुक्तक, समय-सन्दर्भ
‘ब्ल्याक एन्ड ह्‍वाइट जिन्दगीमा रङ बेचिरहेका छौं’ - राजवल्लभ
केही समयअघि नेपाली फिल्मका आशलाग्दा नायक राजवल्लभ कोइरालासँग भेट्ने मेसो मिल्यो । बहाना थियो - विदेशबाट निस्कने एउटा नेपाली पत्रिकाको लागि अन्तर्वार्ता गर्ने । अन्तर्वार्ताका लागि जानुअघि जय नेपाल हल पुगेर उनले अभिनय गरेको ‘अपवाद’ हेरें । युवा निर्देशकको प्रयास प्रशंसनीय नै लाग्यो । वर्षौं निश्चित आकारप्रकारको टापमा खाँदिएर बसेको नेपाली फिल्मको खुर एकैचोटि विस्तार हुने अपेक्षा गर्नु मिल्दो कुरा पनि होइन । एक समय नेपाली फिल्मको पर्याय बनेका राजेश हमालको धङधङी र ढर्राबाट बिस्तारै मोडिंदै छ फिल्मक्षेत्र । मोडिने क्रममा संक्रमण पनि पक्कै देखिएको छ । पढेका बौद्धिक नायकमा दरिए पनि पर्दामा त्यसअनुसारको छनक नभएका राजेश हमाललाई किन महानायक भनिन्छ, थाहा छैन । उनका धेरै फिल्म हेरियो । कुनैको छाप पनि मनमा छैन । फिल्म राम्रो बन्नु-नबन्नुमा कथा, पटकथा र निर्देशकीय कौशलको कुरा भए पनि दिइएको भूमिकामा त कलाकार (यदि हो भने) को केही न केही खुबी देखिनुपर्ने हो । तर महानायकको हरेकजसो फिल्ममा उस्तैखाले गर्जन मात्रै सुनियो ।
बरु राजवल्लभ जस्ता केही नयाँ कुरा दिऊँ भन्ने सुझबुझसहित आएका युवामा भर लाग्छ । यसैले नेपाली फिल्मको दिशा बदल्न युवा पुस्ताले बोकेको नयाँ कम्पासबारे जान्न उनैसँग कुरा गर्ने भइयो । ‘पर्खिबसेँ’ फिल्मबाट नेपाली फिल्मक्षेत्रमा डेब्यु गरेका राजबल्लभ छोटो समयमै चल्तीका नायकमा दरिन सफल भएका छन् । कलेज अफ फिल्म स्टडिजको पहिलो ब्याचका उत्पादन उनी चिन्तनशील र सुझबुझ भएका कलाकार मानिन्छन् । पोखरामा चार वर्षसम्म एफएममा कार्यक्रम समेत चलाएका रहेछन् उनले ।
ललितपुरको एउटा क्याफेमा उनी फरासिलो रुपमा प्रस्तुत भए :
Posted by Jotare Dhaiba at Sunday, January 13, 2013 1 : Comments
‘ब्ल्याक एन्ड ह्‍वाइट जिन्दगीमा रङ बेचिरहेका छौं’ ...